Dagaallada qabaa’ilka ee ka socda gobolka Darfur ee dalka Suudaan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 48 qof rabshadihii u dambeeyay, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda.
Wakaaladda wararka ee SUNA ayaa Axaddii soo xigatay iyada oo soo xiganaysa ururka dhakhaatiirta ee dalka ka hawlgasha “tirada dhimashada ee weeraradii xagjirka ahaa ee al-Geneina waxay gaadhay 48 qof”.
Raiisel wasaaraha Suudaan Abdalla Hamdok ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka maalintii Sabtida in uu amar ku siiyay wafdi “heer sare” ah, oo ay ku jiraan hay’adaha amniga in loo diro Galbeedka Darfur si ay ula socdaan xaalada.
Gobolka Darfur oo aad u baaxad weyn ayaa waxaa ka dhacay dagaalo qaraar oo qarxay 2003, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 300,000 oo qof halka ay ku barakaceen 2.5 milyan, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Waqtigaas, dagaal ayaa qarxay markii fallaagada qowmiyadeed iyo kuwa laga tirada badan yahay ay isku dhaceen.
Isku dhacyada waaweyn ayaa hoos u dhacay sanadihii la soo dhaafay laakiin isku dhacyada ku saleysan qowmiyadaha iyo qabaa’ilka ayaa ku soo noqnoqda mararka qaar, inta badan qaab iska hor imaad ah oo u dhexeeya xoolaleyda reer guuraaga ah iyo beeraleyda aan deganeyn ee ka soo jeeda kooxaha aan qowmiyadaha ahayn. Carab aan ahayn
Rabshadaha ayaa inta badan ka dhaca gobolka sababo la xiriira dhul beereed iyo biyo.
Suudaan waxay kujirtaa kala guur siyaasadeed oo qasan kadib markii xukunka laga tuuray Hogaamiye Omar Al-Bashir iyo mudada dheer ee Abriil 2019 kadib banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeday xukunkiisa looga tuuray.
Dowladda ku meel gaarka ah, oo ah nidaam awood qeybsi ah oo ka kooban jeneraallo iyo shaqsiyaad rayid ah, ayaa dooneysay inay heshiis la gasho kooxaha mucaaradka ee ku sugan aagagga ugu waaweyn ee colaadaha ka jiraan ee Suudaan, oo ay ku jirto Daarfuur.
Laakiin laba qaybood ayaa diiday inay ku biiraan heshiis nabadeed dhawaan, oo ay ku jiraan Jabhadii Xoreynta Suudaan (SLM) ee uu hogaaminayay Abdelwahid Nour, oo la rumeysan yahay inuu taageero xoogan ku leeyahay Daarfuur.
Howlgalka Wadajirka ah ee Qaramada Midoobay ee Darfur (UNAMID) ayaa si rasmi ah howlahooda u joojiyay 31-kii bishii Diseembar ee sanadkii hore.